China 100% Cotton Trendy Baby Baby Suit PY-YR007 Kugadzira uye Fekitori | Pinyang
Varume S Zvipfeko
Varume S Hoodie & Sweatshirt
Varume S T-Shirt
Varume S Shirt
Varume S Jacket
Varume S Tirauzi
Vakadzi S Zvipfeko
Vakadzi S Hoodie & Sweatshirt
Vakadzi S T-Shirt
Vakadzi S Shirt
Vana S Zvipfeko
Retro Square Collar Pfupi Sleeve Woen T-Shirt PY-DT004
Kudhinda Sexy Mitambo Pfupi Sleeve Vakadzi T-Shirt PY-D ...
Gym Nhabvu Yakareba Sleeve Vakadzi T-Shirt PY-CT002
Yakasarudzika Logo Yakareba Sleeve Yevakadzi'S Hoodie PY-WW003
100% Cotton Pfupi Sleeve Varume T-Shirt PY-ND004
100% Cotton Trendy Yevacheche Muviri Suit PY-YR007
100% donje inochinja mwana sutu sutu
1. Ndezvipi zvakanakira mbatya dzakachena dzedonje?
Nekuti donje faibha murombo conductor wekupisa uye magetsi, ayo kupisa conduction coefficient yakanyanya kwazvo, uye nekuda kwayo porosity uye yakakwira kuomarara, yakawanda mweya inogona kuunganidzwa pakati peiyo tambo, uye mhepo iri murombo conductor wekupisa nemagetsi. Naizvozvo, yakachena yekotoni fiber machira ane yakanaka yekupisa yekuvhara, uye kupfeka yakachena donje mbatya kunoita kuti vanhu vanzwe kudziya. 2, sei kupfeka T-shirt?
Buda: T-shati + yakafara brimmed ngowani nekuti iyo melanin maseru mune ganda revana haina kukura uye ine murombo kurwisa kune ultraviolet mwaranzi, zvinokurudzirwa kupfeka refu T-shati kana refu ruoko hembe kana uchienda kunze, izvo zvisingagone chete kudzivirira kupisa kwezuva, asi zvakare chengetedza ganda risina kusimba remwana.
Dai zvakare rega mwana apfeke yakanaka mweya inokwenenzverwa yakafara brimmed ngowani, anogona zvakare kutamba yakanaka yekudzivirirwa nezuva, asi zvakare inogona kudzivirira kupisa.
2. Kufamba mumunda: refu ruoko hembe + mudhebhe
Muzhizha, kana vabereki vachida kuenda nevana vavo kunhandare, vanozopedza nguva yakareba vari panze, uye zviri nyore kuti vapiswe nezuva. Mukuwedzera, umhutu, minzwa, mabhakitiriya uye zvichingodaro zvinokanganisa ganda ravo. Saka pfeka bhurugwa refu remaoko kuvana, kwete yakanaka chete shading mhedzisiro, asiwo kudzivirira kurumwa neumhutu, kukwenya kweminzwa uye mamwe mamiriro ezvinhu.
Chigadzirwa chinoshandiswa: zvekupfeka zveboka, zvemunhu kugadzirisa, nezvimwewo, zvinogona kugadzirisa ruvara, pateni, logo.
--Sei kusarudza isu?
1Various masitaera ane mufashoni dhizaini uye akasiyana mavara kuti uwane zvaunoda.
2.High mhando uye yakanakisa sevhisi.
3.Small huwandu hunogamuchirwa.
5.Offer sevhisi yekuwedzera yako logo.
--Chii chinonzi MOQ?
Zvechigadzirwa chakasiyana, jira rakasiyana, huwandu chaihwo huchave mutsauko, pl ipa mutengesi wedu zvaunoda, tichaongorora MOQ yako asap.
-Ungaziva sei huwandu hwakawanda?
Tisati tagadzira, isu tinokutumira iwe PP sampuro, mushure mekusimbisa, isu tobva tazotanga chigadzirwa hombe.
-Ko nezve kurongedza?
Isu tinogadzika iyo PP bhegi kurongedza kana iwe usiri chinodiwa, kana iwe uchida kuzadza kurongedza, pl tizivise, isu tichakurudzira yakakodzera kurongedza kana yakagadzirirwa seyakagadzirwa yako.
- Hwangu yangu ichaendeswa sei?
Tinogona kutumira zvinhu nekutaura, nendege, nechitima kana negungwa. Isu tinokupa iwe yakanakisa kutumira nzira zvinoenderana nehuwandu hwako hweodha.
Zvadaro: Autumn Uye Nguva Yechando Bhandige YeMwana mucheche Muviri PY-YR005
Pfupi Sleeve Mucheche Kukwira Sutu PY-YR006
Yakarukwa Fit Cotton Mucheche Romper Suit PY-YR008
Autumn Uye Nguva Yechando Bandage Yechando Yevacheche Muviri Sutu ...
Jogging Pfupi Sleeve Mucheche Kukwira Sutu PY-YR004
Kudziya Kotoni Mucheche Kukwira Suit PY-YR001
Cotton 0-12 Mwedzi Mwana Jump Suit PY-YR010
89 Qessen Road, Yekunze-yakasimwa Industrial Park, Xinjian Dunhu, Nanchang Guta, Jiangxi Province, China